पेट्रोलियम पदार्थ « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
Tag: पेट्रोलियम पदार्थ
काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाइएको जानकारी दिनुभयो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका विषयमा सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्न
काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनको बैठकमा पेट्रोलिय पदार्थमा लागेको कर कम गरेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने सहमति भएको छ । शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकमा सो सहमति भएको हो
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिदेखि पाठ्यपुस्तकको अभावमा सरकारले ध्यान दिन सांसदको माग
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरुले समसामयिक विषयमा ध्यान नपुगेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरुले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिदेखि पाठ्यपुस्तकको अभावमा बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएका विषयमा सरकारको ध्यान नपुगेको
इन्धनको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन नसक्ने सरकारको जवाफ
मन्त्री बडूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने मूल्य निर्धारणले नेपालमा मूल्य घटबढ हुने स्मरण गराउँदै हाल अस्वभाविक लाग्नेगरी भएको मूल्यवृद्धि पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारले नै निर्धारण गरेको तर्क गर्नुभयो ।
इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिबारे जानकारी दिन सोमबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक थानीले यस्तो बताउनुभएको हो ।
आइतबारबाट आयल निगमले डिजेल र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । यसको प्रत्यक्ष मारबाट नागरिक हैरान भएका छन् । हप्तैपिच्छे बढ्दै गएको इन्धन मूल्यको प्रभाव मध्यम वर्गीय परिवारको हातमुख जोर्ने
आयल निगमलाई राप्रपाका यी सात प्रश्न
प्रतिलिटर पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको कच्चा पदार्थको मूल्य कति पर्छ ? नेपाल आयल निगमका कर्मचारीको बोनस कति छ ? नेपालका भीभीआपीलाई वर्षको कति पेट्रोल निःशुल्क उपलब्ध गराइन्छ ? प्रतिलिटर पेट्रोल,
पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिकाे विरुद्धमा विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन
काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोध गर्दै विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन भएको छ । नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियुले आज (सोमबार) बुटवल, विराटनगरलगायतका शहरमा प्रदर्शन गरेको हो । बुटवल बहुमुखी
पेट्रोलियम पदार्थमा एकै पटक अचाक्ली मूल्यवृद्धि
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा एकै पटक भारी मूल्य वृद्धि गरेको छ । आइतबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको हो ।
मुल्यवृद्धिको छानविनका लागि संसदीय समिति बनाउन एमालेको माग
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मुल्यवृद्धिको छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न अधिकार सम्पन्न संसदीय समिति बनाउन माग गरेको छ । शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा